Casinha de Furnas - Capitólio - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGeandra
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uGeandra iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yonwabela ezona ngxangxasi zintle ngaphakathi kwimiwonyo yommandla weCapitólio. ICasinha de Furnas ikunikeza indawo yokuhlala etofotofo kwaye epholileyo, phakathi kwendalo kunye noxolo lwelali yaseFurnas, eneendlela ezininzi zokuhamba kunye neengxangxasi.
Indlu elula nesanda kulungiswa, ilungele ukwamkela usapho lwakho okanye iqela labahlobo. Inabalandeli besilingi kwigumbi ngalinye lobusuku obufudumeleyo. Ifakwe kwindawo ezolileyo kwaye kumbindi wendalo. Ukulula, ukuzola kunye nokuthuthuzela.
4.72 · Izimvo eziyi-99
Ummelwane uzolile kwaye uzolile, ulungele abo bafuna ukuphumla. Ijikelezwe bubuhle bendalo apho unokuva isandi seentaka kwaye ukufutshane neendawo eziphambili zokhenketho.
Umbuki zindwendwe ngu- Geandra
Ndihlala ndifumaneka ukunceda kwaye ndinike iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokhenketho kunye neendawo zokundwendwela. Inombolo yefowuni iza kufumaneka emva kokuba ubhukisho luqinisekisiwe, ngokwemigaqo yenkonzo yakwa-Airbnb. Kwakhona, ndikulungiselele isikhokelo seendawo zokukhenketha kunye neendawo ezinomdla kuwe.
Ndihlala ndifumaneka ukunceda kwaye ndinike iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokhenketho kunye neendawo zokundwendwela. Inombolo yefowuni iza kufumaneka emva kokuba ubhukisho l…